11 / 09 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
နေ့: စက်တင်ဘာလ 11 2019
တူရကီသမ္မတနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူမဟာခေါင်းဆောင် Mustafa Kemal Ataturk အဆိုပါထုတ်ပယ်ခံရKARDEMİRအသုံးပြုပုံထိုနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်İsmetİnönüအခြေခံ၏3ဧပြီလ 1937 သမိုင်းမှာ "အမျိုးသားစက်မှုလုပ်ငန်းထူထောင်ရေးဟာအပြောင်းအရွေ့" ကိုစတင်, Fatma9စက်တင်ဘာလ 1939 ပေါ်ပထမဦးဆုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မီးဖိုထဲဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး Osmaniye နှင့်Kahramanmaraşဆက်သွယ်ထားသောကားလမ်းပေါ်တွင်အလုပ်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Yesilova ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူများ Hayrettin Güngörအားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Andirin Yesilova နှင့်အတူ Kahramanmaras, Osmaniye Kadirli ခရိုင်၏မြူနီစီပယ်သွေးလွှတ်ကြောချိတ်ဆက်ပေါ်တွင်အလုပ်ပြီးစီးခဲ့သည်။ [ပို ... ]
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Inc လက်အောက်ခံ ORBEL ဒါဟာကေဘယ်လ်ကားလိုင်းများက operated နှင့် Boztepe ရွှေအကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကိုဂရုစိုက်ရန်ရယူခြင်း "240 operating နာရီ" ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂရုစိုက်အကြား 16.09.2019 18.09.2019, တပ်မတော် Boztepe အတွက်အဓိကခရီးသွားဒေသများ၏တဦးတည်းကျင်းပ [ပို ... ]
Izmit Dervişoğlu Salim လမ်း, D-100 အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းအဖြစ်နိုင်ငံသားများမှန်ဆောင်မှုကိုပေး။ နိုင်ငံသားများ Adnan Menderes လမ်းပေါ်မှာBaşiskeleတလျှောက် Salim Dervişoğluဘူတာရုံ, Golcuk အားဖြင့် Mimar Sinan, Turgut Ozal နှင့်တံတားများ, Izmit စျေးကွက်သုံးပြီး Izmit တည်ရှိသောစင်တာ [ပို ... ]
Foreground လုံခြုံရေးအတွက်Akçaova Way ကို
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Kandıraအကျဉ်းထောင်နောက်ကွယ်မှတည်ရှိသောနှင့်အမျှဝေးဆုံးAkçaovaအပေါ်ထိခိုက်ပျက်စီးဖြစ်ကြောင်းလမ်းŞile- Agva 16 ကီလိုမီတာပိုမိုအဆင်ပြေများနှင့်အဆင်ပြေလုံခြုံရေးဖန်ဆင်းအဖြစ်ဆန့်။2700 တထောင်လေ့လာမှုများအတွက်တန်ချိန် [ပို ... ]
အဆိုပါ 23 ဧပြီလ guhem ပစ်မှတ်ထဲမှာ
Gökmenလေကြောင်းလေကြောင်းလေ့ကျင့်ရေးစင်တာ (GUHE ငါ) မြို့တော်မြို့တော်ဝန် '' နှင့်အတူတူရကီရဲ့အာကာသ-ရေးရာပထမဦးဆုံးလေ့ကျင့်ရေးဧရိယာ '' 200 သူတို့ဧပြီလဝန်ဆောင်မှုဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ဆိုပါတယ် 23 သန်းစက်ရုံအကြောင်းကိုကုန်ကျမည်ဟုစုံစမ်းစစ်ဆေး Alinur Aktas အတွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မြို့တော် [ပို ... ]
IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, အHaliçသင်္ဘောကျင်းနိုင်ငံတွေကိုခရီးလှပြီးနောက် "ဟုသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများထံမှအကြံဉာဏ်ကိုရတယ်, တစ်ဝင်ငွေမျိုးဆက်ပုံစံနှင့်အများပြည်သူပွင့်လင်းကြောင်းနှင့် Is ။ ငါကအကောင်းအသံထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အကဲဖြတ်လိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။ İmamoğlu, ထိုသင်္ဘောကျင်းခရီးစဉ်အပြီးkurmaylarıyla [ပို ... ]
အဆိုပါ 2014 368 သန်းခုနှစ်တွင်ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်Kömürhanအလုပ်စလုပ်ဖို့ပေါင်တံတားအဆုံးမြန်နှုန်းမှာရောက်နေပါတယ်။ ကိုလက်စသတ်သောအခါ, တံတားစာပေလောကီသားတို့သည်အဝင် 2020 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးမည်ဖြစ်ပြီးအသွားအလာမှဖွင့်လှစ်ခံရဖို့မျှော်လင့်ရသည်။ Malatya- Elazığတံတားနှင့်လမ်းKömürhanအကြားတည်ရှိသည် [ပို ... ]
ဇူလိုင် 2016 2019 spanning Osmangazi တံတားနှောင်းပိုင်း3သန်းယာဉ်များဇွန်လတွင်စတငျနှင့်သတင်းများအရ 22 နှစ်ပေါင်း။ တံတားများအတွက် 14 600 တထောင်နှစ်ပေါင်းသန်း (3 နှစ်ပေါင်း 43 800 တထောင်သန်း) တစ်ဦးအာမခံအဆင့်မြှင့်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဆူး [ပို ... ]
Trabzon ပြုခံရဖို့ထင် Trabzon တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဥက္ကဌ Murat Zorluoğlကောင်စီအစည်းအဝေး, အလငျးရထားစနစ်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်. နောက်ဆုံးပေါ်အခွအေနေ shared ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Zorluoğl "ဟုအဆိုပါစီမံကိန်းသည်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးယခင်ကပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြခဲ့သည်။ အလွန့်အလွန်မြင့်မားတဲ့ [ပို ... ]
၎င်း၏နည်းလမ်းအပေါ်ဟောငျး Wagon TÜDEMSAŞ
TCDD TÜDEMSAŞအားဖြင့်ပျင်းရိကားကိုပန်းခြံအမျိုးအစား Gbs ရထားတှဲအတွက်ဖြစ်ပြီး, စီးပွားရေးနောက်တဖန် Lgs အမျိုးအစားကွန်တိန်နာရထားပြောင်းပေးတော်မူ၏။ R & D ကိုအဖွဲ့ကစီမံကိန်းTÜDEMSAŞ, လှည်းအတွက် Wagon ပြုပြင်ရေးစက်ရုံအပေါ် 2014 နှစ်အသွင်ပြောင်းစတင် 218 [ပို ... ]
နည်းပညာ, ဦးဆောင်ယင်း၏ကျွမ်းကျင်သူဝန်ထမ်းများနှင့်သာလွန်ဝန်ဆောင်မှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူကဏ္ဍတွင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယူကရိန်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာ၏ရူပါရုံ၏မူဘောင်နိုင်ငံတကာရုံးများနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးလပ်ြရြားမြစီမံကိန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအင်ဂျင်နီယာ, သူကဆက်ပြောသည်။ တစ်နှစ်ကျော်ကျော်သည်မိုးသည်းထန်စွာရုတ်သိမ်းနှင့် 60 ဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
Volvo ကုန်ကား, မော်ဒယ်နှင့်ကင်ပိန်းအကြား9စက်တင်ဘာလ 31 2013 ဒီဇင်ဘာလကမ်းလှမ်းကြိုတင်% လျှော့စျေး xnumx'y အထိကုန်တင်ကားများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်မှရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ယင်းအကငျြ့ "ကျွန်တော် Volvo အားဖြင့် Temsa စီးပွားရေးစက်များ၏တူရကီ Volvo ကုန်ကားဖြန့်ချိ [ပို ... ]
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများ Sakarya ဌာနခွဲကသမ္မတဟိုစနီမူဘာရက်Gürpınar၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း, Sapanca Kırkpınarစီစဉ်ထားနှင့်လူမျိုး၏တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေသောကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်. ရေးသားထားသောကြေညာချက်ထဲမှာ .. IMO ကသမ္မတ Gurpinar, လူမှုရေးမီဒီယာအကောင့်များမှKırkpınar Sapanca လုပ် [ပို ... ]
သင့်ရဲ့စွန့်ပစ်မီးကျနော်တို့ Autism နှင့်အတူကလေးများပြန်သုံး
AGID, ıstanbullightနှင့်လူမှုရေးတာဝန်ယူမှုနှင့်အတူ Autism ဖောင်ဒေးရှင်းမှအမြိုးအနှယျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အဓိကအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူ့ကျန်းမာရေးနှစ်ခုစလုံးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အဖြစ်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်အတူသားသမီးများ၏ပညာရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေရန်လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်အလင်းရောင်အပါအဝင်စွန့်ပစ်, ပြန်လည်အသုံးပြု။ နည်းပညာလျှင်မြန်စွာဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
အလင်းရောင်နှင့်ပြည်သူ့ကဏ္ဍ, စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့်သူတို့၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ကိုအတူတကွလာမယ့်မျှတသောıstanbullightအပေါ်ဆကျဆံ။ အကောင်အထည်ဖော် LED စွမ်းအင်ထိရောက်မှုပစ်မှတ်အထူးသဖြင့်အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်စမတ်မြို့စီမံကိန်းများပြောင်းလဲမှု၏အမှု၌အများပြည်သူနှင့်အညီ, အဆိုပါနှစ်ပတ်လည်စျေးကွက် [ပို ... ]
ယနေ့တွင်သမိုင်း 11 စက်တင်ဘာလ 1882 Bey နှင့် Mehmet Nahid ကန်သတ်မှတ်ချက်များအတွက် Teodorica သခင်ဘုရား၏အစည်းအရုံးလိမ့်မည် Adana-Mersin လိုင်းများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၌ရှိ၏နှင့်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်န်ကြီးဌာနမှစေလွှတ်ခဲ့သည်။ အကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်သည် haberlertarih ရထားလမ်းနှင့်အခြားဆက်စပ်သတင်းများယနေ့တွင်: 11 စက်တင်ဘာလ [ပို ... ]